Kinkou Justin : mpanjono fitaratra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana | NewsMada
Kinkou Justin : mpanjono fitaratra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana
Par Taratra sur 29/06/2020
Anisan’ny nanohitra ny fametrahana lamina hiarovana ny helodranon’Ambodivahibe i Kinkou Justin tany am-boalohany. Niova izany taty aoriana ary izy indray no lohany, mitarika ny mpanjono any an-toerana sy ny manodidina hiaro ny tontolo iainana satria foto-piveloman’izy ireo ny ranomasina.
Tafapetraka any Ambodivahibe, distrika Antsiranana II, faritra Diana, ny fari-dranomasina arovana (AMP). Tany am-boalohany, nanohitra izany i Kinkou Justin, 60 taona, mpanjono, satria noahiahiny ho alain’ny vahiny ny tany an-toerana. Resy lahatra izy taty aoriana, rehefa nentin’ny CI tany Andavandaoka Toliara, nahita maso ny fandaminana tany an-toerana. Tsapany ny tombontsoa ateraky ny fiarovana azy ka izy indray no nitarika ny mponina rehetra. Maro ny tsy faly tany am-boalohany, nahazo fandrahonana ho faty ny tenany sy ny fianakaviany, saingy voatohiny izany noho ny herim-pony sy ny fikirizany.
Sefo fokontany Ambavarano ny tenany sady filoha lefitry ny vovonana Mitafa, ivondronan’ny fikambanana mpanjono any amin’ny helodranon’Ambodivahibe.
Zava-dehibe ho an’i Kinkou Justin, ny fanomezan-danja ny fiarahamonina sy ny kolontsaina. Ankehitriny, tezainy sy tarihiny ny mponina sy ny mpanjono any an-toerana hahay hanaja ny tontolo iainana, ny zava-mananaina ary indrindra ny lamina sy ny fepetra samihafa, amin’ny fiarovana ny harena an-dranomasina.
“Mamelona antsika ny ranomasina”
Izy no nitarika voalohany ny mpanjono, hiompy osy ho anisan’ny fivelomana rehefa akatona mandritra ny telo volana ny fotoam-panjonoana, indrindra ny jono horita, efa tato anatin’ny 10 taona izao (nanomboka ny taona 2010). Miaiky tanteraka ny mpanjono namany amin’izao fotoana izao fa nitombo ny fatran’ny hazandrano azon’ny mpanjono sy ny karazany, taorian’ny nametrahana ny fepotoam-panjonoana, raha nihena be izany tany aloha. Lasa fitaratra ho an’ny manodidina sy eto Madagasikara ny AMP Ambodivahibe, ankehitriny.
Hafany ho an’ny mpanjono rehetra eto amin’ny Nosy: “Mamelona antsika ny ranomasina. Tsy mitsaha-mihena ny vokatra anefa, koa ndao arovana ny ala, ny ala honko, ny akorandriaka hisian’ny fiarovana ara-tsakafo ho an’ny taranaka any aoriana.